China yakazara-otomatiki 3 ply kumeso kumeso mask yemuchina uye vatengesi | ICT
Yakazara-otomatiki 3 ply kumeso kumeso mask mashini
Kugadzira Disposable Chiso Mask
Inoraswa Fabric Chiso Mask
Inorasa Isina Kurukwa Mask Kugadzira Mashini
Yakatamiswa: Vhidhiyo Yekutsigira Kutevedzera
Iyi mask yekugadzira mutsara inoshandiswa kugadzira 3ply isina-yakarukwa masks.
Iine hunhu hunotevera:
1.Kuenzaniswa nemashini yekumusoro yemasiki yekumhanyisa, muchina uyu wakachipa uye unogona kudzorera mutengo nekukurumidza ；
2.Parizvino, inonyanya kudiwa isina-yakarukwa masasi epasi inofanirwa kunge iri 3ply falt kumeso maski, kunyanya mushure mekunge denda rapera, nekunaka kwemweya kubvumirwa uye kwakakodzera kudzivirirwa. Iyo yakachipa 3-ply isina-yakarukwa mask ichave inodiwa kwazvo, uye muchina uyu wakanyatsokodzera;
3.Iko kuvaka kuri nyore kazhinji kazhinji ndiko kwakanyanya kuvimbika, kune yakaderera kutadza chiyero uye zvakanyanya kushanda kugadzirwa.
Isu tinoshandisa matanda emapuranga kurongedza masiki mashini uye kusimbisa iwo.
Mutsetse wekugadzira mask unosanganiswa nemashini yekugadzira maski uye maviri maske tambo welding Machine unit.
Chigadzirwa mutsara maitiro ekutsanangura:
1. Kuverengera kuverengera kunogona kunyatso kudzora zvigadzirwa zvinobudirira uye chirongwa chekugadzira.2. Iyo furemu yakagadzirwa nealuminium alloy uye isina stainless simbi, ine mwenje uye wakanaka chitarisiko uye isina ngura.3, kudzokorora kutendeuka kudzora, zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo kugadzirisa kumhanya kwemidziyo.4, dhonza bara mugomo mune izvo zvinhu, zvakanyatsojeka chinzvimbo, chinogona kuita kuti hupamhi hwekugadziriswa kwezvinhu zvakasvibirira hushoma, kuchengetedza mutengo.5. Hurefu hwakapera uye hupamhi hunodzorwa zvakafanana, nekutsauka kwe ± 1mm, iyo inogona kunyatso kutonga kureba kwakapera.6. Midziyo yacho ine yakakwirira dhijimendi yemagetsi uye zvakaderera zvinodiwa kune vanoshanda. Izvo zvinongoda kusunungura zvinhu uye kurongedza zvapera zvigadzirwa.7, bhendi mhando yekurapa mask yekumusoro inotora iyo ultrasonic system, iyo transducer, iko kushanda kwakagadzikana, kushanda kuri nyore.8. Iyo yega inochengetedza welding vhiri yakagadzirwa neinotungamira yepamusoro-simbi DC53, iyo inogona kureba hupenyu hwehuvhu uye iite kuti isapinze uye idonhe.
. * Pre-Kutengesa Service
4. Wona yedu Fekitori.* Mushure mekutengesa Service
4. Muchina wacho uchave neyaka-gore rewarandi yemuchina, 2 makore waranti yechikamu chemagetsi. Munguva yewarandi gore kana paine chero zvikamu zvakaputswa kwete nevanhu. Isu ticha yemahara kubhadhara kutsiva iyo nyowani yako iwe. Waranti ichavamba mushure mekuti muchina watumira isu tagamuchira iyo B / L.MIBVUNZO
Ehe, asi mari yekufambisa inobhadharwa newe. Saka chaizvo kuti uchengetedze mutengo wako, tichakutumira vhidhiyo yemakina ezere muchina
kumisikidza uye kukubatsira iwe kusvika kumagumo.
3. Iwe uri fekitari kana kambani yekutengesa? Isu tiri fekitori, uye kunyanya R&D, kugadzira uye kutengesa akasiyana-siyana ekutakura zvinhu.Takaita basa rekutakura R&D uye kugadzirwa kweanopfuura makore gumi.
4. Ndeipi yako nzira yekubhadhara?
Usati waendesa, tinokutumira iwo mafirimu nemavhidhiyo kuti iwe utarise mhando, uye zvakare iwe unokwanisa kuronga zvemhando
Kuongorora uri wega kana nevaunosangana navo muChina.
6. Tinotya kuti haungatitumire muchina mushure mekutumira mari yacho?
Ndokumbira utarise pamusoro pedu bhizinesi rezenisi uye chitupa. Uye kana iwe usingavimbe nesu, saka tinogona kushandisa Alibaba kutengeserana kuvimbiswa
sevhisi, simbisa mari yako, uye simbisa yako yemuchina wako-panguva yekusvitswa uye mhando yemuchina.
7. Nei tichifanira kusarudza kambani yako?Isu tine hunyanzvi mukutakura michina kweanopfuura makore gumi, uye tinopa zviri nani mushure-pekutengesa basa. Iwe hauvadzire njodzi yekuita kwedu.
Yepfuura: 2020 hunyanzvi uye kudhiza kwetekinoroji Zvakanaya zvese disposable N95 kumeso mask maseke yekutengesa
Inotevera: 1600mm Meltblown Nonwoven Fabric Make Machine
Maawa makumi maviri nemana online Kutengesa kupisa Kunopedza otomatiki zvese-mu ...
700PCS / min Kuita otomatiki flat kumhanya 3 ply kumeso mask ...
Diki Inotenderedza Nzeve Nzeve kumeso kweMasiki inogadzira M ...
ICT Instock Yakagadzirira Kutumira Hwozviita Disposable ...